အော် ပ ရေ တာ ဘလက်…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » အော် ပ ရေ တာ ဘလက်…။	31
အော် ပ ရေ တာ ဘလက်…။
Posted by black chaw on Mar 8, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Entertainment, Myanmar Gazette, News | 31 comments
ဒီတနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်မှာ မြန်မာဂဇက် ရုံးကို ဖုန်းဆက်လာသမျှ ဖုန်းမှတ်တမ်းပါ…။
ဟုတ်ကဲ့ မြန်မာဂဇက် ကပါ ခင်ဗျာ…။
အော်…မြောက်ဥက္ကလာ မျက်နှာဖုံးစွပ် လူသတ်မှု ကိစ္စလား ခင်ဗျာ…။
ဟုတ်ကဲ့ ပါဝင်ကျူးလွန်သူ ၁၅ ဦးစလုံးကို သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါပြီတဲ့ခင်ဗျာ…။
ဟုတ်ကဲ့…အစ်ကိုကြီးအနေနဲ့ ထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှချပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်တယ်ပေါ့နော်…။
အော်…အခုတော့ သေဒဏ်ချလိုက်တာဆိုတော့ ဒီထက်ပျင်းထန်တာတော့ မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ…။
အော်…အဲဒါတော့ ကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့လည်း မဖြေတတ်ပါဘူးခင်ဗျာ…။
ဟုတ်ကဲ့…။ ဟုတ်ကဲ့…အခုလို ဖုန်းဆက်တာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ…။
မြန်မာဂဇက် ရဲ့ အော်ပရေတာပါခင်ဗျ…။
ဟုတ်ကဲ့…။ အော်…ဦးခင်ညွန့် ရဲ့ ကျွန်တော့် ဘ၀ အထွေထွေ စာအုပ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်…။
ဈေးကလည်း ၈၀၀၀ လောက်ဆိုတော့ မ၀ယ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ…။
ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ အဖြစ်မှန်ကို သိရတာပေါ့နော်…။
ဦးခင်ညွန့်က ဘယ်လိုပြောသတဲ့လဲ ခင်ဗျ…။
ကျွန်တော်က ဘယ်သူ့ကို တောင်းပန်ရမှာလဲ လို့ ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်…။
အော်…သူကိုယ်တိုင်ကို က တောင်းပန်ရကောင်းမှန်း မသိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ…။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုကလည်း သူတို့ မ တောင်းပန်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပြီးသားပါခင်ဗျာ…။
ခင်ဗျာ…။ ခွင့်လွှတ်ပေမယ့် မမေ့နိုင်ဘူး ပေါ့နော်…။
ဟုတ်ကဲ့..။ ဟုတ်ကဲ့..။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ…။
အော်…အလုပ်သမား တွေ အနေနဲ့ အမြင့်ဆုံးလခက တစ်ရက်ကို ၁၃၅၀ ပဲ ရတယ်ပေါ့နော်…။
ခင်ဗျာ…။ အနိမ့်ဆုံးက တစ်ထောင်ကျပ်ပဲ ရတယ်ပေါ့နော်…။
အော်…အဲဒါဆိုရင်တော့ တော်တော် နည်းတယ်လို့ ပြောနိုင်တာပေါ့ခင်ဗျာ…။
ဟုတ်တာပေါ့…။ ဟုတ်တာပေါ့…။ ကလေးတွေက ကျောင်းသားတွေဆိုတော့
လစာအပြင်တခြား ထောက်ပံ့ကြေးတွေဘာတွေများ မပေးဘူးလားခင်ဗျ…။
အော်…ထောက်ပံ့ကြေး၊ မုန့်ဘိုး၊ ရက်မှန်ကြေးတွေ ပေါင်းလိုက်ရင်တော့
အော်…အချိန်ပို ကြေးတွေ ဘာတွေများ သပ်သပ် ရတာ မရှိဘူးလားခင်ဗျ…။
အစိုးရအနေနဲ့ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာကို အမြန်ဆုံး သတ်မှတ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်…။
လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီးနဲ့တွေ့ရင် ပြောပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ…။
ဟုတ်ကဲ့…။ မြန်မာဂဇက် ကပါခင်ဗျာ…။
အော် အခုပဲ အလုပ်သမားတစ်ယောက် ဆက်သွားသေးတယ်ခင်ဗျ…။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကတော့ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်သွားစေချင်တာ
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုတို့ အလုပ်ရှင်တွေ အနေနဲ့ပေါ့နော်…။
အရည်အချင်းနဲ့ တာဝန်ယူမှုတွေ ယူလာခဲ့ပေါ့နော်…။
မြန်မာ ဂဇက် ကပါ ခင်ဗျာ…။
ခင်ဗျာ ကြောင်ထီးတစ်ကောင် အပူတပြင်းအလိုရှိနေတယ်ပေါ့နော်…။
အော်…ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဂဇက်မှာ ကြောင်ထီးတစ်ကောင် ရှိတယ်ကြားလို့
အော်…ရုပ်ရှင်ထဲ ထည့်ရိုက်မလို့ ပေါ့နော်…။
ခင်ဗျာ…ငါးသိန်းခွဲတန်ကြောင်မ ကို ၀ယ်ထားတာပေါ့နော်…။
အော် ဟိုတစ်နေ့ကတောင် မင်းသမီး အိချောပိုနဲ့ တွဲလို့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တက်လာတာ
မြင်လိုက်ပါသေးတယ်ခင်ဗျ…။ အော် အဲဒီ ကြောင်က ငါးသိန်းခွဲတန် ကြောင်မပေါ့နော်…။
ကြောင်ထီးကို ရှာတာဆိုရင်တော့ တခြားမှာပဲ သွားရှာတာအကောင်းဆုံးပါခင်ဗျာ…။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဂဇက် က ကြောင် က အသက်ကြီးရှာပြီခင်ဗျာ…။
ခဗျာ…ကြောင်မလိုက်စားလွန်းလို့ ကြောင်ရုပ်တောင် မပေါက်တော့ပါဘူးခင်ဗျ…။
ဟူး…အော်ပရေတာ ဘလက် ဒီနေ့ ကံမကောင်းပါလား…။
black chaw has written 320 post in this Website..
View all posts by black chaw →	Blog
ခင်ဇော် says: အော် ပရေတာ ဘလက် ဘဝ ရောက်သွားပြန်ပြီကိုးးး
ဂဇက်ကကြောင်ကတော့ ပို့သသော မစ်တာ ကြောင့် ကြောင်ရုပ်ပျောက်လို့ ရှေ့မထွက်ရဲ ဆိုဗျဲ။
kai says: ဟုတ်ကဲ့… မြန်မာ့ဂဇက်ကပါ…။
ဟုတ်ပါတယ်..။ ဒီနေ့က.. ဆဲလ်မာမြို့မှာ.. လူမည်းတွေချီတက်ပြီး.. သူတို့မဲပေးနိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဆန္ဒပြတာ… နှစ်၅၀ပါတ်လည်နေ့ပါခင်ဗျာ..။
ဟာ.. ရိုက်တာပေါ့..ရဲတွေမြင်းတွေနဲ့.. ချီတက်တဲ့အမည်းတွေကိုရိုက်တာ..အယောက်၅၀လောက်ဆေးရုံရောက်သွားတယ်တဲ့..။
ဟုတ်ကဲ့.. ဒီနေ့.. အဲဒီကိုသမ္မတအိုဘားမားကိုယ်တိုင်..သွားပြီးမိန့်ခွန်းပြောသလို.. နောင်မျိုးဆက်တွေပါသတိထားမိအောင်ဆိုပြီး.. သူ့သမီး၂ယောက်ကလည်း တူတူလိုက်သွားပါတယ်..။
ပြီးတော့.. လူမည်းတွေချီတက်ခဲ့ကြတဲ့.. အက်မန်းပီက်တပ်စ် တံတားပေါ်မှာ မိနစ်၂၀လောက်… သမ္မတမိသားစုလမ်းလျှောက်ကြတယ်ခင်ဗျ..။
အမေရိကားမှာလည်း.. အမေရိကန်တွေထဲ.. အသားအရောင်လူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုရှိတုံးပါတဲ့..။
မြန်မာပြည်လား..။ ဗမာနဲ့.. တခြားတိုင်းရင်းသားတွေလား..။
အဲဒီ.. တိုင်းရင်းသားတွေမေးကြည့်… မေးကြည့်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဂေဇက်အော်ပရေတာကိုဘာမေးမေးရဒပေါ့နော်။ နောက်ဆိုမေးအူးမှ ကြောင်ကတော့ ကျပ်တင်ဖို့ပဲကောင်းပါတော့မယယ်တော်
Crystalline says: ဘာလီနိုင်းက လူငယ်​နှစ်​​ယောက်​ကို ​သေမိန့်​လွတ်​​ပေးဖို့.. ဝန်​ကြီးချုပ်​ကစ ​တောင်းပန်​​နေတာ. ညှိနှိုင်းစကား​ပြော​နေတာ​တွေ… သတင်း​တွေထဲသတင်း​တွေထဲ မမြင်​ချင်​အဆုံး… အဲ့ဒီမှာ​ရောက်​​နေတာကြာပြီဖြစ်​တဲ့.. အစ်​မ​တွေ မိတ်​​ဆွေ​တွေလည်း.. အဲ့သတင်း​တွေလာရင်​.. နားစိုက်​..စိတ်​မ​ကောင်း​တွေဖြစ်​ကြ… ဆု​တောင်းကြ​ပေါ့… ကိုယ်​​တွေအတွက်​​တော့… သာမာန်​ဖြစ်​ရိုးဖြစ်​စဉ်​လို.. မသိလိုက်​ဖာသာ..အာ့​တွေကြည့်​ပြီး… ကိုယ်​ကိုယ်​ကို.. ဘာ​ကောင်​လဲပြန်​​တွေးမိ​သေး..
black chaw says: ဒီနေ့ ပေးတဲ့ ကွန်းမန့်ရှင်တွေကို
တစ်ယောက် အစိမ်း တစ်ချက်စီနဲ့
သူကြီးကိုတော့ BC ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
kai says: ကျေးကျေးဗျို့…
.. မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအကြောင်းမို့.. ဖြည့်မယ်ခင်ဗျ..။
Young people in Burma went to prison rather than submit to military rule.
“မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေဟာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကို လက်မြှောက် အရှုံးပေးမယ့်အစား အကျဉ်းထောင်တွေထဲ သွားခဲ့ကြပါတယ်။”
မြစပဲရိုး says: ဂုဏ်ယူစရာပါ။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို အပြုတ်ဖြုတ် နိုင် ရင် ပိုပြီး ဂုဏ်ယူ လက်မထောင် လို့ ရမယ်။
အခုတော့ လူတွေ ရင်း ရတာဘဲ ရှိတယ်။
သူတို့ က ပိုပိုပြီး အားကောင်း လာတာ ကတော့ တစ်ခုခု လို နေလို့ဘဲ။
မြစပဲရိုး says: ဟဲလို ဟဲလို
အော်ပရေတာ ဘလက် ပါလား။
ကျုပ် က လေတပ်ဗိုလ်ချုပ် မြ ပါ။
ခင်ဗျား တို့ မြန်မာဂဇက်က ကြောင်ထီး အတွက် ငါးကြော် တို့ နွားနို့တို့ ပို့ လို့ ရနိုင်မလား လို့ပါ။
ဟဲ ဟဲ ဟဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ မြစပဲရိုး ;
ဟုတ်ကဲ့ အော်ပရေတာ ဘလက်ပါ ခင်ဗျာ…။
မြန်မာဂဇက်က ကြောင်ကြီးခဗျာ အစာတောင် မစားနိုင်တော့ဘူးလို့
စေတနာကိုလေးစားပေမယ့် နွားနို့တွေ ငါးကြော်တွေကိုတော့
လက်ခံမပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ ခင်ဗျ…။
naywoon ni says: အ​နော်​တို့တိုင်​ပြည်​က သူရဲ​ကောင်း​တွေ​မွေးထုတ်​​ပေး​နေတဲ့ အာနာချင်​ စနစ်​ဆိုတဲ့ စက်​ရုံကြီး ရှိတယ်​​လေဗျာ
Ma Ma says: ကလင် ကလင် ကလင်
အခုလို သိချင်တာတွေကို ဖြေကြားပေးသွားတဲ့ အော်ပရေတာကြီးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်လို့ပါ။ သိပ်မနေရတော့မယ့် ကြောင်ကြီးအတွက်တော့ မိတ်ဆွေကောင်းတို့ရဲ့ ၀တ္တရားအရ ကုသိုလ်လုပ် အမျှဝေပေးမယ်ဆိုတာလေး ပြောပေးပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says:fကလင် ကလင်
fb မှာ ​ကြောင်​ပုံ​လေးနဲ့ပါ ခု ကျ​တော့ မပါ​တော့ ဘူး ။ ​အော်​ သူဂျီးဆိုဒ်​ ​လေးမှာစ်ိုးလို့ ။ ဟုတ်​လား ။ အဲ့ဒါ​လေး သိချင်​လို့ လှမ်း​မေးတာပါ ​အော်​ပ​ယေတာဂျီး​ရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ naywoon ni ;
ဟဲလို…ဟဲလို ဟုတ်ကဲ့ ကိုနေ၀န်းနီလားခင်ဗျာ…။
FB မှာ ပုံတင်ရတာ လွယ်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ…။
မြန်မာဂဇက်မှာကျတော့ ပုံတင်ဖို့ နည်းနည်းခက်နေလို့ပါခင်ဗျ…။
ကိုနေ၀န်းနီ အနေနဲ့ မြန်မာဂဇက်မှာလည်း ကြောင်ပုံလေးမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်
Mr. MarGa says: ကလင်​ ကလင်​ ကလင်​
ဟုတ်​ကဲ့ ​အော်​ပ​ရေတာ ဘလက်​​ချောကို​ပေါ့​နော်​ ​မေးစရာ​လေးရှိတယ်​​ပေါ့​နော်​
ဟိုတစ်​ရက်​က​ပေါ့​နော်​ ဖွဘုတ်​ဆိုတဲ့ရွာထဲမှာ​ပေါ့​နော်​ ​ခွေးဇာတ်​ထုပ်​ရိုက်​ဖို့ ဆိုပြီး​ပေါ့​နော်​ ​သရုပ်​​ဆောင်​စာရင်းယူသွားတယ်​​ပေါ့​နော်​
အဲ့ဒီကိစ္စ​လေး​ပေါ့​နော်​ ခုထိ ဘာမှမ​တွေ့​သေးလို့​ပေါ့​နော်​ အ​ခြေအ​နေ​လေး ရှင်းလင်းတင်​ပြပါဦးလို့​ပေါ့​နော်​ ​ပြောချင်​တယ်​​ပေါ့​နော်​
black chaw says: @ Mr. Marga ;
အဲ့ခွေးဇာတ်ကြီးကို ခဏရပ်ထားရပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျာ…။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဒီပို့စ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရှုတ်ချတယ်။
black chaw says: @ ၀င့်ပြုံးမြင့် ;
ဘာမှ မရေးပဲ ပြန်ထွက်သွားတာထက်
အခုလို ရှုတ်ချကြောင်းရေးပြီး ပြန်ထွက်သွားလို့
ဦးကြောင်ကြီး says: ..အော်ပရေတာဗလက်
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ကေ​ကြောင်​ကြိီးကို မီးဒုတ်​ရှို့ဂျ
pooch says: ကလင် ကလင်
ဒီနေ့ ၉ ရက်နေ့ အိမ်ကသွားလေသူ ဦးကြီးရဲ့ ၁၁ လပြည့်ပါ
သူ့အတွက် ရည်စူးပြီး တောင်ပေါ်ဒေသက မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် စောင်အထည် ၁၀၀ လှူ ခဲ့ပါတယ်
အများကြီးမလုပ်နိုင်ပေမဲ့ နိုင်ရာကနေ စပြီး လုပ်နေပါတယ် လို့
အထူးသဖြင့် မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် တိုင်းရေးပြည်ရေးကတော့ အောက်ထိုးဆင်းနေတာမို့
ရာသီဥတုကလည်း ပူလာပြီမို့ လေတိုက်ပွဲတွေနွှဲရင်း သင့်ကြောင့်မီးမလောင်ပါစေနဲ့ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားကြပါလို့
ဘေးက ဆီပုံးကိုင်ပြီး အသင့်စောင့်နေတဲ့သူတွေ ရှိတယ် သတိထားကြပါ
black chaw says: @ pooch ;
မနေ့က အတွက် ဘီစီ ကို သူကြီးမင်းကို ပေးအပ်ထားရာကနေ
ဒီနေ့အတွက်တော့ ညည်းကို ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
Mike says: .ဟုတ်ကဲ့…ဟုတ်ကဲ့..အော်ပရေတာဘလက်လားဗျ
.ဟုတ်ကဲ့..ဟုတ်ကဲ့..၀မ်းသာပါတယ်ခင်ည Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ Mike ;
ဟုတ်ကဲ့ပါ Mike ရေ…။
ရာသီဥတုက ပူပြင်းလာတော့ အရက်မသောက်ရဲတော့ပါဘူးခင်ဗျာ…။
ဟုတ်ကဲ့…။ ဟုတ်ကဲ့…အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ…။
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟဲလို… မြန်မာဂဇက်က ဆြာဘလက်လားခင်ဗျ…
အခုလို စာရေးပြတာ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ရဘီမို့…
ဒီတခါ ရွာပြန်လာရင် ဘလက်တွေ ဘဲတွေ ဝယ်မလာရဘူးပေါ့နော်…
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ… မှတ်ထားပါ့မယ် … အဟိ အဟိ
black chaw says: @ ဦးကျောက်ခဲ ;
အော်…ဟောင်ကောင်က အစ်ကိုကြီးလား ခင်ဗျ…။
တစ်ခါတစ်လေ ဖီးလ် လာရင်တော့ သောက်ဖြစ်ပေမယ့်
ဘလက်တွေ ၀ယ်လာစရာမလိုတော့ပါဘူး ခင်ဗျ…။
အော်…ဟောင်ကောင် ဘဲကင် ကတော့
အဲ့လောက် ကိန်းခန်းမကြီးပါဘူး ခင်ဗျ…။
အော်…၂ ကောင်တောင် ၀ယ်လာပေးမှာပေါ့နော်…။
လင်မယား ၂ ယောက် တစ်ယောက် တစ်ကောင်စားရအောင်ပေါ့နော်…။
Alinsett@Maung Thura says: FB မှာကတည်းက ဖတ်ပြီးကြောင်းးး
Wow says: အာ့… ဘာဖစ်လဲ လဂါးအရေမရ အဖတ်မရ….
ဟီးးးး ဒီနေ့ ပတ်ရမ်းချင်နေဒါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ Wow ;
ဒါ ဦးဘက် ပိုင်တဲ့ ပို့စ်…။
ဆန္ဒရှိရင် လက်မှာ လက်ပတ်ပတ်ပြီး
ဒုတ်တစ်ချောင်း နဲ့ ဆုံးမချင်လည်း ရသေးတယ်…။
Wow says: နေကန်းဒယ် စိတ်မကန်းဘူး.. ဒါနဲ့ လက်ပတ်အနီလေးပတ်ပီးရင် အကြမ်းဖက်လို့ရဘီပေါ့နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 13
tun swe says: ကရင်​ကရင်​အဲ​လေကလင်​ကလင်​…..ဟင်​!!!
ဖုံး​ခေါ်လို့လဲရဝူး ​အော်​ပ​ရေတာ အိပ်​​ပျော်​​နေပြီနဲ့တူတယ်​.
Wow says: အားနာပါတယ်ချင် မိတ်ဆွေခေါ်ဆိုသောဖုံးမှာ မာဆတ်သော်လဂေါင်း ကာရာအိုကေသော်လဂေါင်း ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေါ်ဆိုရွေ့မရနိုင်ပါချင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.